Famantaranandro manandro: inona izany, toetra, fiasa ary fahalianana | Meteorolojia amin'ny tambajotra
Portillo Alemanina | 11/02/2021 12:44 | Fisarahana
El famantaranandro an'ny tanàna dia iray amin'ireo mpizahatany manaitra indrindra satria manana tantara sy fiasa lehibe izy. Ohatra, ho an'ireo mpitsidika an'i Prague, ny famantaranandro manandro dia iray amin'ireo toerana be mpitsidika indrindra. Anisan'ireo tantara notantaraina fa misy ny sasany mampino.
Noho izany dia hanokana ity lahatsoratra ity izahay hilaza aminao ny tantara sy ny toetran'ny famantaranandro.
1 Famantaranandro ara-panandroana mahavita mampiseho fotoana
2 Fahaiza-manao famantaranandro
3 Curiosities sasany
Famantaranandro ara-panandroana mahavita mampiseho fotoana
Ny tantaran'ny famantaranandro astronomia Prague dia misy antsipiriany marobe izay tena mampino tokoa. Ohatra, ny iray amin'izy ireo dia tonga tany amin'ny tompony izay nanamboatra famantaranandro hoy izy mba tsy hahafahany mamorona iray hafa toa izany. Misy ireo mino fa amulet izany dia natao hiarovana ny olom-pirenena rehetra. Rehefa hita ny fandrosoana sy ny zava-misy momba ny angano sasany momba ny tantara dia avelantsika any aoriana ireo tantara ireo hifantoka amin'ny fomba fiasan'izy ireo. Mbola mandalo ny taona, ny sombin'ny famantaranandro manandro dia mahaliana hatrany ho an'ny olona tia ny rafitra analog.
Ary io dia famantaranandro afaka maneho fotoana amin'ny fomba maro. Ny endriny dia ny a astrolabe ary misy kodiarana 3 afaka manamarika fotoana 5 amin'ny fotoana iray. Raha mijery ny tapany ambony isika dia mahita teatra saribakoly hita eo anelanelan'ny jamba roa izay nanintonana ireo apostoly 12. Miala isaky ny 60 minitra ny tsirairay amin'izy ireo hanondro ny ora tokony ho izy. Maoderina kokoa ny tarehimarika noho ny famantaranandro, na dia tamin'ny taonjato faha-XNUMX aza izy ireo. Midika izany fa naseho ireo isa taorian'ny namoronana azy ireo.
Eo amin'ny farany ambaniny dia manana kalandrie izay misy fanoharana momba ny volana sy ny vanim-potoana. Avereno ihany koa hoe iza no masindahy isan'andro amin'ny taona. Samy liana amin'ny zavakanto ny roa tonta ka mahasarika mpizahatany an'arivony maro any Prague isan-taona. Ny firavaka amin'ity famantaranandro ity dia ny vatany afovoany satria sombin-javatra natao tamin'ny 1410 tany am-boalohany.
Ary ity famantaranandro ity dia manaitra tokoa satria afaka manondro ny fotoana amin'ny fomba dimy samihafa izy. Mahaliana ny rafitr'ireo sombiny. Hanome antsipiriany ny tsirairay amin'izy ireo izahay. Amin'ny lafiny iray, manana ny masoandro volamena izay mihetsika manodidina ny faribolana zodiakaly isika. Ity sombin-javatra ity dia afaka mampiseho antsika adiny telo amin'ny fotoana iray. Ny famantarana voalohany dia ny toeran'ny tanana volamena. Miorina amin'ny isa romana izy ary milaza amintsika ny ora any Prague. Rehefa mandalo ny tsipika volamena ny tanana dia maneho ny ora amin'ny endrika ora tsy mitovy. Farany, rehefa mamaky ny peratra ivelany izy ireo dia manisy marika ny ora aorian'ny fiposahan'ny masoandro araka ny fotoana Bohemian.
Ny iray hafa amin'ny fahaizan'ny famantaranandro manandro dia ny manondro ny fotoana anelanelan'ny fiposahan'ny masoandro sy ny filentehan'ny masoandro. Ny rafitra hanondroana an'ity indray mitoraka ity dia mizara ho 12 "ora". Mba hanaovana izany, ampiasao ny elanelana misy eo amin'ny masoandro sy ny afovoan'ny tontolon'ny. Tadidio fa miova mandritra ny taona ity fepetra ity, satria tsy mitovy ny halavan'ny andro rehetra. Rehefa manakaiky ny vanim-potoana fahavaratra isika dia lava kokoa ny andro ary lava kokoa ny eo anelanelan'ny fiposahan'ny masoandro sy ny filentehan'ny masoandro. Mifanohitra amin'izany no izy, rehefa ao amin'ny ririnina isika dia manana halavany lava kokoa eo anelanelan'ny fiposahan'ny masoandro sy ny filentehan'ny masoandro.
Fahatelo, ny sisin'ny famantaranandro astronomika dia misy tarehimarika voasoratra ao amin'ny endritsoratra Schwabacher amin'ny volamena. Ireo isa ireo dia miandraikitra ny fanondroana ireo sanganasa tahaka ny natao tany Bohemia ary manomboka manamarika ny 1 amin'ny hariva. Mba hahafahany mifanindry amin'ny ora amin'ny masoandro, mihetsika mandritra ny taona ny peratra ka azo refesina tsara kokoa.
Etsy ankilany, manana ny peratra zodiak isika. Izy io dia miandraikitra ny fanondroana ny toerana misy ny masoandro amin'ny ekliptika. Ny ecliptic dia tsy inona fa ny fiolahana izay ivoahan'ny tany manodidina ny masoandro. Io no tsipika misy ny hetsika fandikan-teny terrestrial. Ny filaharan'ny peratra zodiacal dia nohazavaina ho fototry ny fiaramanidina elliptical. Ny mahazatra indrindra mahita azy io amin'ny famantaranandro rehetra. Miankina amin'ny kapila mampihetsika ny peratra zodiacal ny hetsika.
Ny filahatr'ity peratra ity dia vokatry ny fampiasana fiarovana stereografika ny fiaramanidina ekliptika. Ny tendrontany avaratra dia ampiasaina ho fototry ity fiaramanidina ity. Mety ho toy ny ampahany hafahafa izany, saingy io no fandaminana hita amin'ny ankamaroan'ny famantaranandro. Farany, iray amin'ireo curiosities dia izany misy ny sehatry ny volana izay mampiseho amintsika ny dingana amin'ny satelita. Ny hetsika eto dia mitovy amin'ny famantaranandro lehibe fa somary haingana kokoa. Ny ankamaroan'ny laza fa mandresy ny famantaranandro manandro dia eo amin'ny vatan'ny foibe.
Ny fahalianana iray hafa dia izy io dia voaforon'ny kapila mijanona eo afovoany sy kapila miodina maromaro izay miasa tsy miankina tanteraka. Ho famintinana, hitantsika fa manana ny peratra zodiacal sy ny sisiny ivelany izy izay voasoratra miaraka amin'ny typography Schwabacher. Izy io koa dia manana fanjaitra telo: ny iray amin'izy ireo dia ny tanana, ny tanana faharoa dia ny masoandro izay mamakivaky azy avy eo ambony ka hatrany ambany ary fahatelo ny teboka kintana izay mifandray amin'ny peratra zodiacal.
Androany dia mety ho rafitra somary tsotra amin'ny fisehoany izy io, saingy tamin'ny androny dia fahagagana ara-teknika izy io. Miresaka izahay fa ny sombin-javatra voalohany dia natsangana tamin'ny taona 1410 ary tsy misy zavatra hafa mampitaha ny teknolojia tamin'izany fotoana izany amin'ny ankehitriny. Tsara homarihina fa ny rafitra mekanika dia miadana loatra ka tsy afaka mankasitraka ny hetsika amin'ny mason'olombelona amin'ny tena izy. Raha te-hahita ny fihetsiky ny famantaranandro manandro isika dia tsy maintsy manoratra ary mandroso. Misy ihany koa ny maodelin'ny solosaina izay ahafahantsika manao fitsapana samihafa hahitana ny fomba fiheviny sy ny fomba fiasan'izy io.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny famantaranandro astronomia Prague sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Haitoetrandro » Fisarahana » Famantaranandro